Nongedzo Yevatangi Yekutanga kuGoogle Analytics-Nhau-Ningbo Judin Yakakosha Monofilament Co., Ltd.
Nongedzo Yekutanga Yevatangi kuGoogle Analytics
Nguva: 2021-06-26 Hits: 2
Kana iwe usingazive kuti chii chinonzi Google Analytics, hauna kuiisa pawebhusaiti yako, kana kuiisa asi usatombotarisa data rako, saka ichi posvo ndechenyu. Kunyangwe zvakaoma kuti vakawanda vatende, kuchine mamwe mawebhusaiti asiri kushandisa Google Analytics (kana chero analytics, yechinhu ichocho) kuyera traffic yavo. Mune ino posvo, isu ticha tarisa kuGoogle Analytics kubva kune yemhedziso yekutanga maonero. Nei uchiida, kuti ungaiwana sei, mashandisiro ayo, uye inoshanda kumatambudziko akajairika.
Nei muridzi webhusaiti wega achida Google Analytics
Une blog here? Iwe une static webhusaiti? Kana mhinduro iri hongu, kunyangwe zviri zvekushandisa pachako kana bhizinesi, saka unoda Google Analytics. Heano mamwe mashoma emibvunzo yakawanda nezve webhusaiti yako yaunogona kupindura uchishandisa Google Analytics.
Vangani vanhu vanoshanyira webhusaiti yangu?
Vanondishanyira vanogara kupi?
Ini ndinoda webhusaiti-inoshamwaridzika webhusaiti?
Ndeapi mawebhusaiti anotumira traffic kuwebhusaiti yangu?
Ndedzipi nzira dzekutengesa dzinotyaira traffic yakawanda kune yangu webhusaiti?
Ndeapi mapeji ari pawebhusaiti yangu anozivikanwa kwazvo?
Vangani vashanyi vandakashandura kuita zvinotungamira kana vatengi?
Vashanyi vangu vatendeutsa vauya nekuenda pawebhusaiti yangu?
Ndingaite sei kuti ndivandudze yangu webhusaiti kumhanya?
Ndeapi mablog zvemukati ayo vashanyi vangu vanonyanya kufarira?
Pane yakawanda, yakawanda mimwe mibvunzo inogona kupindurwa neGoogle Analytics, asi iyi ndiyo yakakosha kune varidzi vewebhusaiti. Iye zvino ngatitarisei kuti ungawana sei Google Analytics pane webhusaiti yako.
Maitiro ekuisa Google Analytics
Kutanga, iwe unoda Google Analytics account. Kana iwe uine yekutanga account yeGoogle yaunoshandisa kune mamwe masevhisi seGmail, Google Drive, Google Calendar, Google+, kana YouTube, saka unofanirwa kumisikidza yako Google Analytics uchishandisa iyo Google account. Kana iwe unozofanirwa kugadzira imwe nyowani.
Iyi inofanirwa kuve account yeGoogle yauronga kuchengeta nekusingaperi uye kuti iwe chete ndiwe unokwanisa kuwana. Iwe unogona kugara uchipa mukana wekuwana yako Google Analytics kune vamwe vanhu vari munzira, asi iwe haudi kuti mumwe munhu ave nehutongi hwakazara pamusoro payo.
Zano hombe: usarega chero munhu wako (webhu dhizaini, webhu mugadziri, webhu inomiririra, SEO munhu, nezvimwewo) kugadzira yako webhusaiti Google Analytics account pasi payo yavo Google account kuti vagone "kuitisa" iyo iwe. Kana iwe nemunhu uyu mukasiyana nzira, vachatora data rako reGoogle Analytics voenda navo, uye uchafanirwa kutanga kwese kwese.
Gadzira account yako uye chivakwa
Paunenge uchinge uine Google account, unogona kuenda kuGoogle Analytics uye tinya iyo Sign muGoogle Analytics bhatani. Iwe uchazokwaziswa nematanho matatu aunofanira kutora kumisikidza Google Analytics.
Mushure mekubaya bhatani reKusaina, iwe unozadza ruzivo rwewebhusaiti yako.
Google Analytics inopa hierarchies kuronga yako account. Unogona kuve neanosvika zana maGoogle Analytics maakaunzi pasi peimwe Google account. Unogona kuve neanosvika makumi mashanu ewebhusaiti zvivakwa pasi peimwe nhoroondo yeGoogle Analytics. Unogona kuve neanosvika makumi maviri neshanu maonero pasi peimwe webhusaiti chivakwa.
Heano zviitiko zvishoma.
MUENZANISO 1: Kana iwe uine imwe webhusaiti, iwe unongoda chete imwe Google Analytics account ine imwe webhusaiti chivakwa.
MUENZANISO 2: Kana iwe uine mawebhusaiti maviri, senge rimwe rebhizimusi rako uye rimwe rekushandisa kwako pachako, ungangoda kugadzira maakaundi maviri, uchipa rimwe zita rekuti “123Business” uye rimwe “Rako”. Ipapo iwe unozoisa yako webhusaiti webhusaiti pasi peiyo 123Business account uye yako wega webhusaiti pasi pePamoyo account yako.
MUENZANISO 3: Kana uine mabhizinesi akati wandei, asi asingasvike makumi mashanu, uye rimwe nerimwe rawo riine webhusaiti imwe, ungangoda kuzviisa zvese pasi peBusiness account. Wobva wave neAkaunti account kune ako wega mawebhusaiti.
MUENZANISO 4: Kana uine mabhizinesi akati wandei uye rimwe rawo riine akawanda mawebhusaiti, kweanopfuura makumi mashanu mawebhusaiti, ungangoda kuisa bhizinesi rega rega pasi payo account, senge 50Business account, 123Business account, zvichingodaro.
Iko hakuna nzira dzakarurama kana dzakashata dzekumisikidza yako Google Analytics account-ingori nyaya yekuti iwe unoda kuronga yako saiti. Iwe unogona kugara uchipa mazita maakaundi ako kana zvivakwa mumugwagwa. Ziva kuti haugone kufambisa chivakwa (webhusaiti) kubva kuakaundi yeGoogle Analytics kuenda kune imwe — iwe unofanirwa kumisikidza chivakwa chitsva pasi penyaya nyowani uye wotadza dhata renhoroondo rawakatora kubva kune yekutanga chivakwa.
Nezve gwara remutangi wekutanga, isu tichafunga kuti une webhusaiti imwe uye unongoda kuona kumwe chete (iyo yekumira, rese data kuona. Iyo setup yaizotarisa chimwe chinhu seichi.
Pasi peizvi, iwe unenge uine sarudzo yekumisikidza panogona kugoverwa data rako reGoogle Analytics.
Isa yako yekutevera kodhi
Paunenge wapedza, iwe uchabaya iyo Get Tracking ID bhatani. Iwe unowana popup yemitemo yeGoogle Analytics uye mamiriro, aunofanirwa kubvuma. Ipapo iwe unowana yako Google Analytics kodhi.
Izvi zvinofanirwa kuiswa pane ese peji pane yako webhusaiti. Iko kumisikidza kunoenderana nerudzi rwewebsite yauinayo. Semuenzaniso, ini ndine WordPress webhusaiti pane yangu domaini uchishandisa iyo Genesisi Sisitimu. Iyi furemu ine chaiyo nzvimbo yekuwedzera misoro uye zvinyorwa zvetsoka pawebhusaiti yangu.
Neimwe nzira, kana iwe uine WordPress pane yako domain, unogona kushandisa iyo Google Analytics naJoast plugin kuisa kodhi yako zviri nyore zvisinei kuti ndeipi tema kana chimiro chauri kushandisa.
Kana iwe uine webhusaiti yakavakwa neHTML mafaera, iwe unowedzera iyo yekutevera kodhi pamberi peiyo tag pane yega yega mapeji ako. Iwe unogona kuita izvi nekushandisa chinyorwa edhita chirongwa (senge TextEdit yeMac kana Notepad yeWindows) uyezve nekuisa iyo faira kune yako webhu inomiririra uchishandisa chirongwa cheFTP (seFileZilla).
Kana iwe uine Shopify e-commerce chitoro, iwe uchaenda kune ako epaZvitoro zvepaInternet uye unama mukodhi yako yekutevera uko kwakatsanangurwa.
Kana iwe uine blog paTumblr, uchaenda kubhulogi yako, tinya bhatani reHedha theme kumusoro kurudyi kweblog rako, uye wozongopinda ID yeGoogle Analytics mumasetingi ako.
Sezvauri kuona, kumisikidzwa kweGoogle Analytics kunosiyana zvichienderana nepuratifomu yaunoshandisa (zvemukati manejimendi system, anovaka webhusaiti, e-commerce software, nezvimwewo), dingindira raunoshandisa, nemapulagi aunoshandisa. Iwe unofanirwa kuwana mirau yakapusa yekuisa Google Analytics pane chero webhusaiti nekutsvaga webhu papuratifomu yako + maitiro ekuisa Google Analytics.
Mushure mekuisa yako yekutevera kodhi pane yako webhusaiti, iwe uchazoda kumisikidza diki (asi inobatsira kwazvo) kumisikidza muwebhusaiti yako mbiri paGoogle Analytics. Aya ndiwo marongero ako eGoals. Iwe unogona kuiwana nekudzvanya pane iyo Admin link iri pamusoro peGoogle Analytics uye nekudzvanya paGoals pasi pewebsite yako Yekutarisa ikholamu.
Zvinangwa zvinotaurira Google Analytics kana chimwe chinhu chakakosha chaitika pawebhusaiti yako. Semuenzaniso, kana iwe uine webhusaiti iwe yaunogadzira inotungamira kuburikidza nefomu yekubatana, iwe unozoda kutsvaga (kana kugadzira) yekutenda peji iyo vashanyi vanopera pamusoro kana vangotumira yavo yekuonana ruzivo. Kana, kana iwe uine webhusaiti kwaunotengesa zvigadzirwa, iwe uchazoda kutsvaga (kana kugadzira) yekupedzisira yekutenda kana yekusimbisa peji revashanyi kumhara pamusoro kana vapedza kutenga.
Zvadaro: Musangano wakabatikana.